Verónica Roth: mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Kune avo vanofarira ehudiki uye edyopopi mabhuku, mavanopa ramangwana renharaunda, makirasi, nezvimwe. chokwadi zita re Veronica Roth nemabhuku ake zvinonyatso kuzivikanwa kwavari.
Asi ndiani Veronica Roth? Ndeapi mabhuku awakanyora? Kana iwe usiri kumuziva, kana zvinopesana, kana uchiziva mabhuku ake ane mukurumbira, isu tinokuudza nezvese zvaakanyora uye nehupenyu hwake.
1 Veronica Roth ndiani?
2 Veronica Roth mabhuku
2.1 Divergent Trilogy
2.2 Ipfupi nyaya dzine chekuita neDhivergent
2.3 Duology Rufu Mako
2.4 Kupera uye kumwe kutanga: nyaya kubva mune ramangwana
2.5 Duology Isu takasarudzwa
Veronica Roth ndiani?
Kwayaka: divergent blog
Veronica Roth akasimuka mukurumbira wetrilogy. Kunyanya, Divergent. Uku ndiko kubudirira kwavakaita munguva diki kuita firimu, uye izvo zvakasimudzira basa remunyori weAmerica uyu akazvarwa muna 1988. Ehe saizvozvo, yakazvarwa kuna baba veGerman, Edgar Roth, naamai vekuAmerica, Bárbara Rydz (ane zvakare chizvarwa chePoland).
Su hupenyu hwapfuura makore ekutanga muNew York, asi vabereki vake pavakarambana, uye amai vake vakaroorwazve, aigara kuIllinois, muBarrington.
Sezvo aive mudiki aifarira kunyora, uye zvakare kuverenga. Mhuri yake yakange iri rutsigiro rukuru kwaari kubvira, pavakaona kuti ane tarenda rekunyora, vakamukurudzira kunongedza kwake kuedza kuvandudza uye kudzidziswa mairi. Saka akanyoresa kuNorthwestern University kwaakadzidza "Creative Writing."
Iye ane degree mune iro basa uye aivewo chinokonzera kunyora bhuku rake rekutanga. Pakutanga yaingova yekunyorwa kwakaomarara, nzvimbo yaakatora zvaakadzidza kubva pabasa rake achizvishandisa sedziviriro yekuzorora kubva kukoreji mabasa. Zita rebhuku iro? Divergent. Muchokwadi, Veronica Roth akataura kuti kekutanga paakasvika "mukubatana" nenyaya iyoyi aive parwendo rwake kuenda kuMinnesota, kukoreji.
Zviripachena, akazviburitsa, uye kwakadaro ndiko kubudirira kuti muna 2011 kwakazivikanwa munyika gumi neshanu. Naizvozvo, akataura kuti yaive trilogy. Zvakare 15 raive gore rakanakira munyori sezvo iye akaroora mutori wemifananidzo Nelson Fitzh.
Kwapera gore akawana kambani inogadzira mafirimu, Summit Varaidzo ichaona iro bhuku, uye tengesa copyright yeiyo firimu adapta. Gore rimwe chetero, ratove muna 2012, akaburitsa chikamu chechipiri, Insurgente.
Muna 2013 yaive nguva yaLeal. Uye zvechokwadi iwe unoziva kuti kuchinjika kwemabhuku ese akaitwa, kukohwa chaizvo kubudirira.
Kana iri mibairo, pane maviri akakodzera. Kune rimwe divi, muna 2011, apo nharaunda yeGoodreads yakapa icho seRinodikanwa Bhuku. Gore rakatevera, zvakare paGoodreads, yakahwina mibairo yeYakanakisa Vechidiki Sainzi Sayenzi Ngano uye Yekufungidzira Nyaya.
Beyond the Divergent trilogy, Verónica Roth akaburitsawo mamwe emabhuku, aya aine budiriro shoma nekuti haana kunzwikwa nezvazvo. Zvisinei, isu tichataura pamusoro pavo pazasi.
Veronica Roth mabhuku
Kwayaka: Guta remabhuku
Kubva kuVerónica Roth, mabhuku akakunda chaizvo uye akareva shanduko, haana akawanda. Chaizvoizvo, chete matatu ekutanga aakatora, Anoparadzanisa, Anomukira uye Akavimbika, vese kubva kuDhivergent trilogy.
Zvisinei, izvo hazvireve kuti munyori akamira kutsikisa, kure nazvo. Basa rake rekunyora rakatanga muna 2011 uye richiri kuenderera muna 2021. Naizvozvo, isu tinokuudza iwe nezve ake mabhuku.
Tinotanga nemabhuku ekutanga akanyorwa naVerónica Roth, uye aya anoti Divergente (2011), Insurgente (2012) naLeal (2013). Ivo vese vakataura nyaya yaBeatrice, musikana uyo, pachinzvimbo chekuve nehunyanzvi hwechimwe chikamu chenharaunda yake, aive navo vese. Uye yaive njodzi, kunyangwe kusvika pakutongerwa rufu kana vakawana chakavanzika chake. Padivi pake, isu tine Cuatro, shamwari ye protagonist.
Iyo trilogy yaive yakarohwa nemabhuku edystopi. Muchokwadi, yakabuda yakatenderedza nguva yakafanana neiyo iyo Nzara Mitambo, iyo yakaita kuti kubudirira kwayo kutonyanya.
Ipfupi nyaya dzine chekuita neDhivergent
Mushure mekupedzwa kweiyo Divergent trilogy, Verónica Roth akaramba achipa "zvipo" kune vateveri, semhedzisiro yenyaya pfupi dzaakaburitsa. Semuyenzaniso, Chechina: muunganidzwa wenhoroondo yeDhivergent, umo maakanyora nyaya shanu pfupi dzairondedzera zvikamu zvehupenyu hweChina, kana maonero ake ezvimwe zvitsauko zvenyaya yekutanga. Ehe, yakanga isina kureba zvakanyanya, nekuti yaive nemapeji makumi maviri neshanu (zvichienzaniswa neiyo trilogy, raive risiri bhuku reichi).
Misoro yenyaya shanu idzi ndeiyi:
Duology Rufu Mako
Mushure mekupedza Divergent, Verónica Roth akaedza rombo rake nenyaya nyowani, mune iyi nyaya duology, ndiko kuti, mabhuku maviri: The Marks of Death, kubva muna 2017; uye Yakakamurwa Nzvimbo, muna 2018.
Iyo nyaya haina kuita zvakanyanya kukanganisa, nekuti haina kuchinjirwa kumufirimu. Asi anga asiri iwo ekupedzisira mabhuku emunyori.
Kupera uye kumwe kutanga: nyaya kubva mune ramangwana
Muna 2019, akatendeka kuchokwadi chekuburitsa bhuku gore rega rega, munyori akaburitsa Magumo uye Mamwe Matangiro: Nyaya kubva mune Remangwana. Iri ibhuku rakasarudzika (yekutanga yaanoita) uye izvo yaive nenyaya pfupi.
Duology Isu takasarudzwa
Pakupedzisira, muna 2020, munyori akatangazve duology. Muna 2020 akaburitsa Isu takasarudzwa uye zvinotarisirwa kuti bhuku rinotevera richabuda muna 2021, kunyangwe hazvo pasina chinozivikanwa nezvazvo.
Teerera ingano ipfupi iyo Veronica Roth akabatana pane iyo dystopian pfupi nyaya anthology Shards & Ashes. Iyo zano rinotenderera ne musikana anowana kudyara kwehuropi uye anogona kuteerera kumumhanzi wevanofa pakati peapocalypse.
Verónica Roth haana kuburitsa zvimwe zvakawanda, asi ane peji rake repamutemo kwaunowana nhau dzaari kusunungura. Parizvino, rake rekupedzisira bhuku ndere Isu takasarudzwa, asi isu hatitonge kunze kuti kune chiziviso nezve chikamu chechipiri cheiyi bilogy. Unofarira munyori here? Ndeapi mabhuku awakaverenga nezvake?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Veronica Roth: mabhuku
Pablo naVirginia, naMarcel Mithois. Pfupiso rondedzera